सहवासका लागि उत्तम समय कुन हो ? – Kalika News
१३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ११:२४ , मा प्रकाशीत
साच्चै भन्ने हो भने सेक्स गर्ने कुनै निश्चित समय छैन न त कति पटक गर्ने भन्ने कुनै वष्तुनिष्ठ सिद्धान्त नै । मानिसहरु आफ्नो समय र उपयुक्तताका आधारमा यौन कर्म गर्ने गर्दछन् ।यद्यपी अधिकांशले भने रातिमा सेक्स गर्ने मान्यता हामीमाझ स्थापित छ । तर, अध्ययनहरुले भनेका छन् कि रातिमा भन्दा विहानको सेक्स उत्तम हुन्छ । (डा. सुबोध पोखरेलबाट)
कारण एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अनुशन्धानहरुले विहानमा सेक्स गर्ने विभिन्नकारणहरु पत्ता लगाएका छन् ।विभिन्न् अनुशन्धानहरुले विहानको साढे ७ बजेलाई सेक्स गर्ने उपयुक्त रहेको पत्ता लगाएका छन् ।